VidOvation သည်ဈေးပေါသော၊ ကျစ်လစ်သော ABonAir AB405 ™ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုချိတ်ဆက်မှုကိုထောက်ပံ့နေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အခုတော့အနိမျ့-ကုန်ကျစရိတ်, Compact ABonAir AB405 ™ကြိုးမဲ့ဗီဒီယို Link ကိုပေးဝေနေ VidOvation
အိတ်ဆောင် System ကိုကြိုးမဲ့ 2,500-မီလီစက္ကန့ latency နှင့်အတူခြေ 33 မှထုတ်လွှင့်-အဆင့်ဗီဒီယို Up ကိုကူးစက်
Lake Forest, ကာလီဖိုးနီးယား။ - ဇူလိုင်လ 31, 2018 - VidOvation ယနေ့ ABonAir AB405 ™, တစ်ဦးမျှသာ 33-မီလီစက္ကန့နှောင့်နှေးအတူတန်ဖိုးနည်း, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုကို transmitter ကိုနှင့်လက်ခံ link ကို၏ရရှိမှုကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ AB405 ENG အဖွဲ့များ, တက္ကသိုလ်နှင့်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်အခြေခံအားကစားလွှမ်းခြုံ, Single-ဇာတ်စင်ဖြစ်ရပ်များ, ဘာသာရေးထုတ်လွှင့်နှင့်အလျှော့ link ကိုတည်ငြိမ်မှုနှင့်မြင့်မားသောရုပ်ပုံအရည်အသွေးမြင့်မလိုအပ်ကြောင်းဗီဒီယိုကူညီရန်ကးအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။
"ABonAir တစ်တာဝေးပစ်, high-performance ကို, ထုတ်လွှင့်တန်းကြိုးမဲ့စနစ်အလွန်နိမ့်အောင်းနေချိန်ပေးဘို့လူသိများသည်, နှင့်၎င်း၏ developer များထပ်မံပြုမိပါပြီ - ဤအချိန်အသစ်တစ်ခု link ကိုအတူအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကင်မရာအဖွဲ့များများအတွက် ကြိုးမဲ့တိုက်ရိုက်ကင်မရာများကနေမီဒီယာစင်တာများသို့မဟုတ်ဝေးလံသောကုန်တင်ကားတစ်ဘတ်ဂျက်ထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်, "ဂျင်မ် Jachetta, VidOvation မှာအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာအရာရှိကပြောသည်။ "ရုံ $ 9,900 မှာထုတ်အဲဒီမှာအများဆုံးတတ်နိုင်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကြိုးမဲ့စနစ်ကဖြစ်လိမ့်မယ်။ "
သတိထားရဒေီယိုဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်မျိုးစုံ input ကို / မျိုးစုံ output ကို (လာတဲ့ MIMO) နည်းပညာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကြိုးမဲ့နှင့်ဗီဒီယိုလိုအပ်ချက်များကို optimization စနစ်အကွာအဝေးတိုးချဲ့ဖို့ ABonAir အင်ဂျင်နီယာများ enabled ။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါ AB405 မျက်မှောက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့လိုင်းနှင့်အတူ 750 မီတာ (2,500 ပေ) ဗီဒီယိုတက် transmit နိုင်ပါတယ်။ သူကတောင်အစွန်းရောက်ရေဒီယို signal ကို enviroments မှာ, စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့်လွှမ်းခြုံသေချာစေရန်နှစ်ဦးစလုံး transmitter ကိုနှင့်လက်ခံအချက်များမှာနှစ်ခုအပြည့်အဝလာတဲ့ MIMO ရေဒီယိုအင်တင်နာကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ဦးက built-in transmitter ကိုနှင့်လက်ခံအကြား bidirectional ရေဒီယိုချန်နယ် AB405 system ကိုအရှင်အတော်လေးကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂီယာများကို pixels ကိုအသီးအသီးအုပ်စုတစ်စု၏မှန်ကန်သောလက်ခံမှုအသိအမှတျပွုနိုငျသညျကိုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါ 33-မီလီစက္ကန့နှောင့်နှေးစေရန်ထို့အပြင် AB405 အတိအလင်းအောင်းနေချိန်လျှော့ချရန်နှင့်ကြိုးမဲ့ကဗီဒီယိုစနစ်တွေအတွက်ပုံအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ ABonAir ရဲ့စီးပွားဖြစ် H.264 codec ပါဝင်သည်။ အဆိုပါလက်စွဲစာအုပ်ရုပ်သံလိုင်းရွေးချယ်ရေး option ကိုကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
fixed setup တစ်ခုသို့မဟုတ်ယာယီထုတ်လုပ်မှုအဘို့, AB405 ပြည့်စုံ mobility များအတွက်အားကောင်းတဲ့, ခရီးဆောင်လက်ခံပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာဝံပိုငှက်အမှု၌ကိုက်ညီနှင့် Single-ဇာတ်စင်ဖြစ်ရပ်များ, OB ဗင်နှင့်ဘာသာရေးထုတ်လွှင့်အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံး ABonAir စနစ်များကဲ့သို့ပင် AB405 ကြောင့်မည်သည့်ကင်မရာအမျိုးအစားနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာမဆိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်သုံးနိုင်တယ်သေချာ, ရှိသမျှ bit နဲ့နှုန်းထားများနှင့်ပုံစံများကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်အားလည်းဘောင်နှုန်းထားများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးထောက်ခံပါတယ်။ VidOvation နည်းပညာဆိုင်ရာကျန်တာတွေအတွက်စာရင်းမဆိုပုံစံသို့မဟုတ်ဘောင်နှုန်းကိုထောကျပံ့ဖို့ AB405 စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
အပြည့်အဝ VidOvation ထုတ်ကုန်လိုင်းအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.vidovation.com.
VidOvation ယင်းထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြား, အားကစား, ကော်ပိုရိတ် AV စနစ်နှင့်အစိုးရစျေးကွက်များအတွက်ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်ဒေတာများထုတ်လွှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ လွှမ်းခြုံကပ်လျက်တည်ရှိဆယ်လူလာ, ကြိုးမဲ့ကဗီဒီယို, ဗီဒီယို streaming များ, ဗွီဒီယိုကွန်ရက်, encoding က, IPTVနှင့် fiber-optic ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ, VidOvation ဖြေရှင်းချက် signal ကိုဆုံးရှုံးမှု, အောင်းနေချိန်, နှောင့်ယှက်, ဆူညံသံများနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များများ၏မကျေနပ်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကို transmission ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ VidOvation က၎င်း၏ client များလုနီးပါးမည်သည့် application သို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်ကျေနပ်နိုင်စွမ်းအတူရှိပြီးသားအခြေခံအဆောက်အဦသို့ထုံးစံဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစည်းကူညီမီနိုင်တဲ့။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအပြည့်စုံစီမံကိန်းကိုဘဝသံသရာမှသက်သေကျွမ်းကျင်မှုသက်ဆိုင် - စီမံကိန်းအတွက်အတိုင်ပင်ခံနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကနေအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဒီဇိုင်းရန်, အာမခံနှင့်ထောက်ခံမှုရန်။ VidOvation မှာရှေ့ဆက်ဗီဒီယိုကိုရွေ့လျားနေပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ vidovation.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/VidOvation/180731VidOvation.docx
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/VidOvation/VidOvation-ABonAir-AB405.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: အဆိုပါ ABonAir AB405 ™ VidOvation မှတဆင့်အမေရိကန်အတွက်ယခုရရှိနိုင်မယ့်တန်ဖိုးနည်း, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုကို transmitter ကိုနှင့်လက်ခံ link ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Facebook က: www.facebook.com/VidOvation/?ref=br_rs
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/vidovation-moving-video-forward
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် VidOvation ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်း ကြိုးမဲ့ကိုဗီဒီယိုက transmitter 2018-07-31
ယခင်: IHSE KVM စနစ် EVS ဌာနချုပ်မှာသွက်လက်သင်တန်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Flexible ကုန်ပစ္စည်းဒီမိုများဖွင့်ပေး
နောက်တစ်ခု: အမ်စတာဒမ်အတွက် 2018 IBC Show မှာပြပွဲရန်ပြောင်းလဲမည်